ShweMinThar: March 2008
သတိရခြင်းက ငါ့ရင်ဘတ်ပေါ် တဖြည်းဖြည်းတွားတက်လာတယ်
ညနံရံတွေကို တစ်စစီ ရိုက်ခတ်တိုက်စားလို့
ဝေးကွာခြင်းမှာ နီးစပ်စွာ အသားကျခဲ့ရတယ်....
တစ်ယောက်ရဲ့ လက်ကိုတစ်ယောက်က မြဲမြဲဆုပ်ကိုင်ခဲ့သော နေ့ရက်များ
အသက်ရှင်ခြင်းကို ပြီးပြည့်စုံစေသော ချစ်သူရဲ့ စကားလုံးများ
တစ်ယောက်ရဲ့ မျက်ဝန်းကို တစ်ယောက်က ဖတ်ရှုနိုင်ခဲ့သော လက်ဖက်ရည်ချိန်များ
အမှတ် ရစရာတွေကို ထပ်ခါတလဲလဲ တမ်းတခြင်းမှာ
နှလုံးသားဟာ အလင်းပိတ်သက်တံ့ တစ်စင်းဖြစ်ခဲ့ရ....
တစ်မြို့တည်းနေပြီး ရနံ့တွေ လေညင်းခူးခွင့် မရခဲ့ဘူး
ဖုန်းခေါ်သံတွေ ငါ့နေ့လည်ခင်းတွေဆီ ရောက်မလာခဲ့ဘူး ချစ်သူရယ်.....
ကံကြမ®ာဟာ ငါတို့ ဖွင့်မဖတ်ရသေးတဲ့ စာမျက်နှာတွေလား
ချစ်ခြင်းမှာ အစွမ်းရှိသရွေ့ ဖူးပွင့်ချင်ပေမယ့်
အလွမ်းတွေနဲ့သာ လုံလုံလောက်လောက် ဖျားနာခဲ့ရပေါ့။
Posted by Alex Aung at 9:06 PM No comments:
Stress Management Specialist - Every Monday
It’s every sophisticated guy’s worst nightmare: He's onadate havingafancy dinner; he tries to impress her by ordering what he thinks isanice bottle of wine, but when the waiter arrives and pours himasmall sample, he's quickly exposed asafraud. He knows nothing about wine tasting.
There’s no need to fake your way out of this one. Follow our four simple steps to wine tasting and you’ll be sipping it likeapro in no time.
Of course, once you know all there is to know about wine tasting, you’ll understand what makesagood and bad wine, and you’ll get to use your powers for good. Don’t send back any wine just because you don’t like its taste. Rather, send back only the ones that don’t smell right or that taste as though they’ve been hanging around for more thanacouple of days.
The first thingaprofessional wine taster does is check the color of the wine. Howawine looks can say an awful lot about the quality and origin of the drink.
The first thing you want to do when wine tasting is contrast the wine’s color againstawhite background (the tablecloth oranapkin will do). Tilt your glass slightly and take note of the color and intensity of the wine.
Most red wines that haven’t been aged start asadeep purple color. As red wine ages, it loses that intensity and becomes paler, likeabrick color. The color ofared wine will also yieldabit of information about the kind of grape used. Pinot Noir, for example, tends to be paler than most.
The color test also works for white wines, whose colors tend to deepen as they age. Moreover, whites from cooler climates aren’t usually as richly colored as those from warmer climates.
After checking the color, give the wineaquick swirl around the glass to check its legs -- the oily film that hangs around the inside of the glass after the wine is swirled. There is some argument that the longer the legs stay on the side of the glass, the better the quality of the bottle. In fact, that’samyth. Legs are only an indicator of alcohol content -- more legs mean more alcohol.
When wine tasting, the next thing to check is the smell of the wine, or its bouquet. Give the wine another gentle swirl around the glass to expose more of it to the air. As the wine settles in the glass, stick your nose into the glass and takeafull sniff.
Think about the smells coming up from the glass: Young wines will tend to have fruity smells (notes of raspberry or citrus, for example), while older ones will have more complex fragrances (earthy aromas like oak or grass).
Don’t be shy about smelling it more than once to see if you like what you smell. If you do, chances are that it will beagood bottle.
You’re not done wine tasting just yet…
Pay attention to the taste
As you (finally!) begin to taste the wine, be cognizant of the fact that very little of the actual taste of wine comes from the sensation on your tongue. You’ll pick up more flavor from the wine by swishing it around in your mouth and paying special attention to the sensations and tastes in the back of your throat.
When wine tasting, slurp the wine slightly to release all its flavors in your mouth. That’s not to suggest you haul back on it like an 8-year-old eating cereal, butagentle slurp as you take in the wine will goalong way toward properly enhancing the taste.
As it enters your mouth, think about the weight and body of the wine: Is it rich and heavy or light and thin? Think about the tastes you notice and ask yourself if this bottle will go well with your meal. If your main meal is steak and the bottle is light and fruity, you may want to consideradifferent bottle. Be sure to think about how the taste of the wine changes as it warms up in your mouth. All wines takeafew moments to fully develop their flavor once they’re out of the bottle, and they will do the same in your mouth.
Evaluate the finish of the wine
The finish is the sensation you get from actually swallowing the wine and it can be very different from the taste you get on your palate.
What you want to look for is an alcohol taste (there shouldn’t be one) and the length of time the wine taste stays with you. This length of time is called the finish and some wines can linger for as long asaminute. Also consider the balance of the wine; do any tastes dominate, or is thisawell-defined bottle?
Generally speaking, the longer the finish, the better the wine.
Posted by Alex Aung at 1:13 PM No comments:
သင့်အနေဖြင့် ဆေးသောက်မည်ဆိုပါလျှင် အောက်ပါအချက်များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
-ဆေးကို အစာနဲ့အတူ သောက်ရမည်လား၊အစာအိမ်တွင် အစာမရှိစဉ်သောက်ရမည်လား၊ထိုသို့ဖြစ်လျှင် အစာမစားမီ တစ်နာရီစောရွေ့သောက်ရမည်လား(သို့) ဆေးညွှန်ကြားသူ ဆရာဝန်အား တိတိကျကျမေးမြန်းထားပါ။ညွန်ကြားချက်အတိုင်း သောက်သုံးပါ။
- ဆေးသောက်ရာတွင် ရေဖန်ခွက်ပြည့်ပြည့် တစ်ခွက်ဖြင့် သောက်ပါ။ အစာရေမျိုအား ဒုက©ပေးမှုကင်းစေပါသည်။ ဆေးအား စုပ်ယူမှု အားကောင်းစေပါသည်။
- ဆေးသောက်ရွေ့ ဝေဒနာသက်သာသည့်တိုင် ဆေးကို ကို့စ် ကုန်အောင် (လိုအပ်ချက်ပြည့်မီအောင်) ဆက်လက်သောက်ရပါမည်။
- ဆေးသောက်လျှင် ပူသောရေ၊ အရည်(ဥပမာ-ကော်ဖီ၊လက်ဖက်ရည်၊ရေနွေးပူပူ)ဖြင့်မသောက်သင့်ပါ။ အပူဓာတ်သည် ဆေး၏ အာနိသင်ကို ပျက်ယွင်းစေနိုင်ပါသည်။
- ဆေးကို လိုအပ်ချက်ပမာဏ(ညွန်ကြားထားသည့် ပမာဏ အတိုင်း)အတိုင်းသာ အတိအကျသောက်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ပိုသောက်ခြင်း(သို့) လျော့သောက်ခြင်း လုံးဝမပြုသင့်ပါ။ ပိုသောက်ခြင်းကြောင့် မလိုလားအပ်သော ဆိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်သည်။ လျော့သောက်ပါက အာနိသင်ထိရောက်မှုမရှိဘဲ ဖြစ်တတ်ပါသည်။
- သူတစ်ပါးအား ညွန်ကြားပေးထားသော ဆေးအား မည့်သည့်အခါမျှ သောက်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ မိမိအား ညွန်ကြားသော ဆေးကိုလည်း အခြားသူအား မတိုက်ကျွေးပါနှင့်။
- နေ့စဉ်မှီဝဲသုံးစွဲရသော ဆေးများကို အချိန်မှန်အောင် သုံးဖို့လိုအပ်ပါသည်။
- ဆေးများကို အရက်နှင့် နီးကပ်စွာ (သို့) အရက်နှင့်အတူ သောက်သုံးခြင်းမပြုရပါ။ အထူးသဖြင့် အိပ်ဆေးများ၊ စိတ်ငြိမ်ဆေးများ၊အရက်နှင့် ဓာတ်မတည့်ဖြစ်တတ်သော ဆေးများ(ဥပမာ- မက်ထရိုနိုက်ဒဇော် Metronidazole) စသည် တို့ကို အရက်နှင့် နီးကပ်စွာ မသောက်သင့်ပါ။ ဆိုးဝါးသော အနÅရယ်ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်။
* အအေးမိခြင်းအတွက် အိမ်တွင်းကုထုံး
သင်အမေးမိနေပြီလား၊ အအေးမိခြင်းဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်တဲ့ရောဂါဝေဒနာတစ်ခုပါ။ သင့်အတွက် အိမ်တွင်း ကုထုံးလေးများ လမ်းညွန်ပေးလိုက်ပါရစေ။
- ဇင့်ဓာတ်ပါဝင်သော သောက်ဆေးမှီဝဲပါ။
ဇင့်ဓာတ်ဟာ အအေးမိခြင်းကို အချိန်တိုအတွင်း ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ စပြီးဖြစ်တာနဲ့ ဇင့်ဓာတ်Zinc Tablets မှီဝဲသင့်ပါတယ်။
ရေနွေးငွေ့ ဇလုံတစ်ခုက ထွက်လာတဲ့ ရေနွေးငွေ့ကို ရှူပေးပါ။နှာစေးနှာပိတ် နှာရည်ယိုတာတွေသက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။
- ကြက်စွပ်ပြုတ် ပူပူလေးသောက်ပေးပါ။
သင့်အတွက် အဟာရလည်းဖြစ်၊ အအေးပတ်တာလည်း မြန်မြန်ပျောက်စေမယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။
- ရေ (သို့) အရည်များများသောက်ပေးပါ။
နေထိုင်မကောင်းစဉ် ရေများများသောက်ခြင်းဟာ ရောဂါဝေဒနာကို လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်းစေမည့် နည်းလမ်းကောင်းပါ။
- ဗီတာမင် စီ မှီဝဲပါ။
သိပÜံနည်းကျ အခိုင်အမာ မပြောနိုင်ပေမယ့် Vitamin Cဟာ Body ရဲ့ ခုခံစွမ်းအားစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေတာကြောင့် ရောဂါ လျင်မြန်စွာ ပျောက်စေနိုင်ပါတယ်။
2007ရဲ့ မနက်ဖြန်တွေကို ရေမျော သဂြိုလ်လိုက်တဲ့အခါ ယနေ့ပိုင်ဆိုင်မှုကို ၀ိုးတ၀ါးလက်ခံရရှိလိုက်ပါတယ်။
ခပ်တည်းတည်းလေး ချည်နှောင်ထားတဲ့ သံယောဇဉ်ကြိုးထဲမှာ ကျွန်မရဲ့ မနက်ဖြန်ပေါင်းများစွာရှိပါလိမ့်မယ်။
ငိုကြွေးခြင်းကို လမ်းခွဲဖို့ မနက်ဖြန်ကို ကျွန်မ မျှော်လင့်ပါရစေ။
ကြင်နာစွာ ငုံ့ကြည့်မယ့် မနက်ဖြန်ထဲမှာ ချစ်သူရှိနေပါ။
ခဏလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မရဲ့ မနက်ဖြန်ကို ရှင်သန်ခွင့်ပေးပါ။
သောက၀တ်ရုံအောက်မှ နွေးထွေးသော ယုယမှုတို့ဖြင့် မျက်ရည်များကို ဖယ်ရှားပေးပါ။
မနေ့ကပေါင်းများစွာကို 2007မှာ မေ့လျော့စွာထားခဲ့ပါပြီ။
အရိုးစွဲအောင် နာကျင်တတ်တဲ့ နှလုံးသားမှာ ကြင်နာမှုတစ်မှုန်တစ်စတို့လို တွယ်ကပ်ငြိစွန်းလို့ရှိနေစေချင်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်ရဲ့ one second အပိုင်းအစများစွာကို သတိရလွမ်းဆွတ်ခြင်းတို့နဲ့ ဖုံးအုပ်ထားလိုက်ပါ။
ကျွန်မရဲ့ ငိုကြွေးခြင်းကို မနက်ဖြန်မှာ ရပ်တန့်လိုက်ပါမယ်။
ကျွန်မရဲ့ ရှိုက်သံတွေကို တမ်းချင်းတစ်ပုဒ်လို ထုတ်လွှတ်ဖို့ငယ်စာရင်းမှာ ဖျက်လိုက်ပါ။
ချစ်သူနဲ့ အတူ မနက်ဖြန်ပေါင်းများစွာကို မျှော်လင့်ပါရစေ။
ရိုက်ချက်ပြင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်းရဲ့ လေစိမ်းတွေကို ကျွန်မရဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ ကာကွယ်ပါရစေ။
ကျဆင်းသွားတဲ့ ချစ်သူရဲ့ ဂုဏ်သိ©ာအလေအလွင့်တွေကို ချစ်သူအတွက် ကျွန်မရဲ့ တွယ်တာခြင်းနဲ့ ဖုံးအုပ်ထားပါမယ်။
မနက်ဖြန်မှာ လန်းဆန်းမှုနေခြည်အောက်ကို ကျွန်မတို့ အဆင်သင့် ရောက်ရှိနေပါပြီ။
ကြိုဆိုခြင်းကို မနက်ဖြန်မှာ ဆုံပါရစေ။
ကြိုဆိုခွင့်ကို မနက်ဖြန်အတွက် ရက်ချိန်းသတ်မှတ်လိုက်ပါ။နှလုံးသားရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုအချစ်တို့နဲ့ ဘ၀ခရီးအတွက် အင်အားဖြည့်ဆည်းပါရစေ။
နက်ဖြန်ပေါင်းများစွာကို မျှော်လင့်သော ကျွန်မအတွက် ယောင်ကိုင်းနေတဲ့ ပုပ်သိုးသိုးအတိတ်ကို ပစöုပÜန်မှာ ပစ်ချနင်းချေရင်း ချစ်သူကို ကျွန်မတမ်းတနေမိပါသည်။
ကြမ်းတမ်းတဲ့ စကားပွင့်များအောက်မှာ ဖြူစင်ခြင်းကိုတွဲပိုးခေါ်ဖို့ ချစ်သူရဲ့ ဖေးမခြင်းကို ကျွန်မမျှော်လင့်ပါရစေ။
ရက်ပေါင်း (၃၆၅)ရက်မှသည် သံသရာခရီးရှည်တစ်လျှောက် များစွာသော မနက်ဖြန်တို့ကို ကျွန်မစောင့်ကြိုပါရစေ။
ချစ်သူရဲ့ အချစ်တို့ကို မျှော်လင့်ခြင်းဖြင့် မနက်ဖြန်ပေါင်းများစွာ......
Originally published on November 1, 2007
Posted by Alex Aung at 10:59 PM No comments:
Posted by Alex Aung at 10:55 PM No comments:
When it all gets turned around and 'round
When everything I've believed in seems untrue